कानमा गाई र ओम शब्द पर्दा केही मानिस चिढिन थाल्छन् : मोदी
काठमाडौं – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधवार मथुरामा स्वच्छता नै सेवा हो नामक अभियान शुरू गरेका छन् ।
नदी, जलाशय र तलाउमा बस्ने प्राणीले प्लास्टिक निलेपछि बाँच्न गाह्रो हुने मोदीको भनाइ छ । त्यसैले एकपटक प्रयोग गरेर फालिने प्लास्टिकबाट छुटकारा पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसै अवसरमा मोदीले भने, ‘केही मानिसको कानमा ओम र गाई शब्द पर्नेबित्तिकै रौं ठाडो हुनु देशको दुर्भाग्य हो । यी शब्द उच्चारण गर्दा देश १६औं शताब्दीमा पुगेको उनीहरू ठान्छन् । प्राचीन ज्ञान अनि यस देशलाई बर्बाद गर्न उनीहरूले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।’
मोदीले मथुरामा फोहर उठाउने महिलाहरूसँग भेटघाट गरे । मथुराका लागि एक हजार करोड भारुभन्दा बढीका योजनाहरूको शिलान्यास पनि उनले गरे ।
उनले पशु आरोग्य मेलाको पनि उद्घाटन गरे । मेलामा उनले किसानहरूसँग कुराकानी पनि गरे ।
मोदीले भने, ‘नयाँ जनादेशपछि भगवान् कृष्णको नगरीमा पहिलोपटक आउने सौभाग्य प्राप्त गरें । भारतसँग श्रीकृष्ण जस्तो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ र उहाँको कल्पना वातावरणप्रेम विना अधुरो छ । यमुना भनिन् कालिन्दी अनि हरियो घाँस चरिरहेको धेनु । यी विना श्रीकृष्णको तस्वीर पूरा हुन्छ त ? दूध, दही, माखन विना बालगोपालको कल्पना कसैले गर्न सक्छ ? प्रकृति, पशुधन र वातावरण विना हाम्रा आराध्य जति अधुरो लाग्नुहुन्छ, त्यति नै अधुरोपन भारतमा पनि देखिनेछ । प्रकृतिको सन्तुलन बनाएर मात्र हामी नयाँ भारततर्फ अघि बढ्नेछौं ।’
जलवायु संरक्षणका लागि आज संसारभरि हडताल गरिँदै
युरेसियन देशका सभामुखहरुको बैठकमा भाग लिन सभामुख महरा कजाकस्तान प्रस्थान काठमाडौं– सभामुख कृष्णबहादुर महरा युरोसियन मुलुकका सभामुखहरुको बैठकमा भाग लिन आज (शनिवार)कजाकस्तान प्रस्थान गरेका छन् । सभामुख महरा ६ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै आज (...
विदेश त्यागेर कृषि रोजेपछि मालामाल
घरमा पसेको बाढीमा पौडिएर रमाउँदै यो जोडी (तस्वीरसहित)